Madaxweynaha Galmudug oo sheegay ‘lama huraan inay tahay’ in gobolka Banaadir uu matalaad ku yeesho Aqalka Sare +VIDEO | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Madaxweynaha Galmudug oo sheegay ‘lama huraan inay tahay’ in gobolka Banaadir uu...
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudud, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa Talaadadii maanta hortagay Guddiga joogtada ah ee Golaha Aqalka sare BF Somaliya, kadib kulan gaar ah oo lagu casuumay Madaxweyne Qoorqoor.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo xarunta ku soo dhaweeyay, islamarkaana hadal kooban jeediyay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay wada shaqeyta Golaha Aqalka sare iyo dowlad Goboleedyada.
Mudane Cabdi Xaashi ayaa Madaxweyne Qoorqoor uga warbixiyay qorsha howleedka golaha iyo sharciyada ay gudbiyeen iyo kuwa horyaalla, isagoo tilmaamay in ay sharciyada horyaalla ay gudbin doonaan.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa waxyaabihii uu ka hadlay ka mid ahaa Maqaamka gobolka Banaadir, isagoona sheegay in 13 xubnood ee Aqalka Sare la meelmarin doono.
“Waxaan rabaa inaan is dul-taago arinta Gobalka Banaadir, Mudane Guddoomiye waxaan rabaa Aqalka Sare muddo xileedkiisa 2aad in uu metalaad ku yeesho Gobalka Banaadir, waa magaalo ama bulsho duruuf waliba oo dowlad leedahay si gaar ah ugu dhacdo, waan ku kalsoonahay inaad deddaalkiina ku biirin doontaan, Madaxweynuhuna dadaal iska saari doono, intaas ayaan usoo gudbinayaa golahaan”.
Halkan ka daawo Maamulka Madaxweyne QoorQoor:
Madaxweynaha Galmudug ayaa ugu dambeeyn rajo wanaagsan ka muujiyay shirka Muqdisho ka socda inuu kusoo dhammaan doono wanaag iyo isu tanaasul, laguna saxiixo hannaan doorasho oo la isku raacsan yahay.
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa xusay in ay muhiimad gaar ah u leedahay Bulshada Sooomaaliyeed qadiyadaha arrimaha doorashooyinka Qaranka.
matalaada gobolka Banaadir ee Aqlka sare
Qoorqoor oo hortagay Aqalka sare